तपाईं मुड मा गंभीर उतार चढाव हुँदा द्विध्रुवी विकार छ. तिनीहरूले धेरै दुःखी र धेरै खुसी हुँदा चरम मुड को vagaries छ. यो गाह्रो शान्त जीवन र संगठन प्राप्त बनाउँछ.
द्विध्रुवी विकार भएका मान्छे मुड परिवर्तन धेरै छ. उदाहरणका लागि, म दुई महिना लागि धेरै दुःखी महसुस र तिनीहरूलाई काम गर्न को लागि यो गाह्रो छ. त्यसपछि खुसी महसुस र तिनीहरूले ऊर्जा धेरै छ किनभने कुराहरू धेरै गरिरहेको सुरु.
यदि यो तपाईं, तपाईंले द्विध्रुवी विकार हुन सक्छ, र तपाईंलाई मदत गर्न तरिका बारे आफ्नो डाक्टर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ.
द्विध्रुवी विकार को लक्षण
तपाईं द्विध्रुवी विकार छ भने, तपाईं धेरै निराश महसुस गर्न सक्नुहुन्छ. के तपाईं सामान्य कामहरू गर्न सक्दैन धेरै दुःखी महसुस हुँदा निराशा छ. तपाईं निराश जब तपाईं महसुस वा गर्न सक्ने कुरा केही महसुस:
धेरै संग व्यवहार, वा खान चाहने छैन
यसलाई ध्यान गर्न गाह्रो
तपाईं द्विध्रुवी विकार ग्रस्त भने, उन्मत्त एपिसोड सामना गर्नेछ. तपाईं खुसी महसुस र ऊर्जा धेरै हुँदा उन्मत्त एपिसोड. तपाईं एक पाश उन्माद छ जब तपाईं महसुस वा अनुभव गर्न सक्ने कुरा केही:
तपाईं ऊर्जा धेरै छ
धेरै खुसी महसुस
सामान्य भन्दा कम सुत्न
कुरा धेरै र धेरै छिटो
तपाईं आवश्यक छैन कुराहरू पैसा धेरै खर्च
उहाँले धेरै चोटि र घटनाहरू स्नातक
तपाईं आत्म-सम्मान देखावटी छन्. के तपाईं सामान्य भन्दा अझ राम्रो र महत्त्वपूर्ण छन् लाग्छ जब आत्म-सम्मान ओभरसाइजगरिएको छ. उदाहरणका लागि, तपाईं त दुख्छ सक्दैन तपाईं superhuman हुनुहुन्छ लाग्छ. वा के तपाईं धेरै प्रतिभाशाली र प्रसिद्ध छन् लाग्छ.
तपाईं ठूलो illusions छ. Grandiose अर्थ धेरै ठूलो. तपाईं यसलाई राम्रो तरिकाले छैन केहि वास्तविक हो भनेर सोच्न गर्दा Illusions छ. के तपाईं धेरै बलियो र यति छ कि यो चोट सक्दैन महत्त्वपूर्ण छन् लाग्छ जब तपाईं ठूलो illusions हुन सक्छ. के तपाईं चोट गर्न सकिँदैन लाग्छ भने, तपाईं खतरनाक कुरा स्वाभाविक छैन के.
तपाईं डाक्टर तपाईं द्विध्रुवी विकार छ भनेर निर्णय गर्न को लागि उन्मत्त एक depressing प्रसङ्ग र प्रसङ्ग छ गर्न आवश्यक. द्विध्रुवी विकार भएका धेरै मानिसहरूलाई जो पनि द्विध्रुवी विकार छ नातेदार छ.